Uyibhala njani incwadi, isikhokelo esipheleleyo ubusilindile | Uncwadi lwangoku
"Uyibhala njani incwadi" luphando olubalwa zizigidi kwiwebhu. Kwaye ukuba ubudala bedijithali abukwazanga ukuphelisa ishishini loncwadi, iincwadi azikaphumi kwisitayile. Phakathi kwezixhobo zonxibelelwano ezisebenzayo nezibanzi ezikhoyo namhlanje, ukubhala kuyaqhubeka ukwanda.
Nokuba ufuna ukuthatha ubuchwephesha bengcinga yakho, ufuna ukuhambisa ulwazi okanye unayo into oza kuyithetha kwihlabathi, incwadi ihlala ilungile. Kodwa,indlela yokubhala ibenye? Ke, kwesi sikhokelo sifutshane, kodwa sityebile kwaye silula, Ndiza kukuxelela ukuba ungayenza njani inkqubo yokubhala incwadi ngamanyathelo ambalwa.
1 Isigaba 1: ukucwangcisa
1.1 Khankanya incwadi yakho
2 Isigaba 2: ukubhala
2.1 Chonga ixesha
2.2 Chaza incwadi yakho
2.3 Zinikezele ekubhaleni
3 Isigaba 3: ukuhlela nokupapasha
3.1 Hlela ngokuzenzekelayo
3.2 Ukucoca i-eraser
3.3 Ukuhlelwa okukhulu
4 Ezinye iingcebiso ezingaphezulu
4.1 Xa ucwangcisa
4.3 Xa uthumela
Isigaba 1: ukucwangcisa
Nokuba ukubhala incwadi kuthatha uyilo oluthile. Ukuba awuvumelani noku, zama ukubhala nanini na xa ekucaphukisa nakwisifundo esingahleliwe kwaye uza kubona indlela ogcwalisa ngayo imfumba yemibhalo ebhaliweyo engagqitywanga, kodwa akukho msebenzi uhloniphekileyo. Ngelixa kukho okwahlukileyo- kwaye ukucwangcisa inkqubo yokwakha ayifuneki ngokungqongqo- ukusebenzisa oku ngokungathandabuzekiyo kuya kwenza yonke into ibe lula kakhulu.
Khankanya incwadi yakho
Ngaphambi kokuqala, kuya kuba kuhle ukuba ubuncinci ube nembono ngokubanzi malunga nencwadi. Yinto elula, ngale nto uyichaza ngokupheleleyo into ofuna ukuyiphumeza ngaphambi kokuqala ukuyenza. Gxila kwizinto ezinje: loluphi uhlobo loncwadi oluza kufumaneka? Lijolise kubaphi abaphulaphuli? Luza kuba luhlobo luni lombalisi? kwaye okona kubaluleke kakhulu: iyintoni injongo yomsebenzi ekufuneka ukuba uyifezekise?
Ukuba unengxaki nale yokugqibela, Kuyacetyiswa ukuba wenze uluhlu lwezinto ofuna ukuzenza kunye nencwadi. Kungcono ngakumbi ukuba imalunga neenjongo zakho okanye zabafundi bakho. Ngokubanzi, emva kwale njongo kuhlala kukho izizathu okanye izizathu ekufuneka zondliwe. Le yeyona nto iqhuba / ikhuthaza umbhali ukuba aqhubeke nokubhala.
Ukuba sele uyichazile incwadi yakho, kuya kufuneka utsalele kwimisebenzi yabanye ababhali ngaphambi kokuba uqale ukubhala. Funda izihloko ezininzi kangangoko unakho kwaye zikuluhlobo olukhethileyo lomsebenzi wakho okanye ezijongana nezihloko ezifanayo. Sukuba nexhala ngokufunda kuphela ezo zithathwa njengezona zibalaseleyo, kuba nawe ufunda kwezi zimbi.
Ukuba umsebenzi awuyontsomi kwaye uphakamisa ingxaki ethile, jika kwisifundo kangangoko kunokwenzeka, nokuba sele uyingcali. Yenza uphando lwakho ngokugqibeleleyo kwaye unikezele ngedatha yokwenyani yokuqinisekisa incwadi yakho, ezinje ngamanani, izifundo, okanye ubungqina. Kuya kuhlala kukho into entsha onokuyifumana.
Isigaba 2: ukubhala
Ukuba uyahambelana nenqanaba elidlulileyo, inkqubo yokubhalwa kwencwadi iya kuba lula kakhulu. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba ubunzima abufikeleli apha endleleni. Ukubhala akusoloko kuvela ukuba lelona nqanaba lilula ekudalweni komsebenziKulapho uninzi lwababhali balahleka khona. Kodwa, kuthathelwa ingqalelo la manqaku alandelayo, kunokwenzeka ukuba kugxilwe kugcinwe.
Xa uqala ukubhala incwadi- okanye ngaphambi kokuba uyenze- Kuyimfuneko ukuseka ishedyuli, usukelo lwemihla ngemihla, kunye nomhla onokugqitywa ngawo. Njengombhali, kufuneka uzibuze ngokwenyani- kwaye, ewe, ngaphandle koxinzelelo- zingaphi iiyure onokuzinikezela suku ngalunye ukubhala incwadi yakho okanye mangaphi amagama onokufikelela kuwo.
Oku kwenzelwa ukuba ungashiyi umbhalo wakho ongagqitywanga. Nangona kunjalo, umhla, umzekelo, oziva uphefumlelwe kakhulu okanye ufuna ukuqhubeka nokubhala, sukuzicinezela. Kuya kufuneka uyeke ukuhamba kokubhala ukuya kuthi ga ngokufuna. Uvimba wolondolozo, uqobo, ufana nento ephilayo. Okwangoku kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukubhala incwadi-nokuba inde okanye imfutshane- kufuna uqeqesho kunye nokuzimisela. Kuya kufuneka ulibale malunga nokuphazamiseka xa kufika ixesha lokubhala.
Inqaku elibalulekileyo kukuqinisekisa ukuba ushiya okungenani usuku olunye lokuphumla, kuba ukuba uyigqithile, ungaphazamiseka. Nangona kunjalo, ukuba uyeka ukubhala ixesha elide, kusenokwenzeka ukuba kamva awuyi kuwuthatha umsonto wokubhala. Lumka. Into ebalulekileyo kukushaya ibhalansi.
Chaza incwadi yakho
Yenza ulwandlalo oluneenkcukacha ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni ngombono wokuqala wencwadi yakho ukuze ungalibali, kwaye ikukhokele xa ubhala. Hamba ucinge ngesihloko esichazayo esichaza umsebenzi kwaye kwangaxeshanye sivuse umdla womfundi.
Ukuba le ncwadi ibandakanya abalinganiswa abaziintsomi, ungabakhulisa bodwa ngaphambi kokuba uqale ukubabandakanya ukuze bangabonakali ngathi abaphumi ndawo. Thatha ixesha lokunika umntu ngamnye ubuntu obahlukileyo kunye nokwenza umfanekiso oza kuwubonwa luluntu xa ufunda ngawo. Amaxesha amaninzi abalinganiswa encwadini baba nentsingiselo engakumbi kubafundi kunakwisiqwenga somxholo uqobo.
Nje ukuba konke oku kungasentla, khathalela ukubhala; nje kanjalo. Bhala ikakhulu ngokwakho, into yokuqala ephumayo kwaye yintoni ekonwabisayo. Sukucinga ngomfundi okanye unyanzele uhlobo oluthile loxinzelelo kuwe. Ngamanye amaxesha xa umbhali ehlupheka "kwiphepha elingenanto" yithi kungenxa yokuba akabhali nto imenza azive kamnandi.
Musa ukucinga ngemali Ukuba uzama ukufumana ubutyebi ngencwadi, kunokwenzeka ukuba ayizukuphumelela. Bhala nje ukuzonwabisa. Ulibale malunga nokubhala kwababhali bakho obathandayo, ungazami ukubalinganisa naphantsi kwazo naziphi na iimeko. Landela isitayela sakho kwaye uvumele yonke into ihambe. Kulumkele ukusebenzisa ilizwi elingenzi nto kwaye, ngaphezu kwako konke, ungakhathazeki ngeempazamo.
Isigaba 3: ukuhlela nokupapasha
Umbhalo wesandla ongacwangciswanga ayisiyoncwadi, kukuqokelelwa nje kwamagama kunye nemibono. Hlela lelona nqanaba linzima kwaye lelona lide kwinkqubo yokudala umsebenzi kwaye ibaluleke kakhulu. Eli nyathelo lixhomekeke ekubeni incwadi iyayifumana na intsingiselo, ixabiso kunye nomgangatho owaneleyo wokubhala ukuze wamkelwe kakuhle luluntu kwaye mhlawumbi yinkampani epapasha.
Emva kokuba uyigqibile into ebhaliweyo, ulibale ngayo kwaye uthathe ikhefu elincinci leveki enye. Ngale ndlela uya kuba nakho ukubona ngcono kakhulu iindawo ezifuna ukulungiswa. Emva kweli xesha, inkqubo yokuzihlela iqala. Ifuna-ikakhulu-ukuba le mibhalo ebhaliweyo inokufundwa ngaphandle komzamo omkhulu. Unokufumana isikhokelo sokushicilela kwidesktop kwi-intanethi ukukunceda.
Zama ukufumana ukungafezeki okanye ukungangqinelani kwincwadi yakho, njengezikhewu zamacebo okanye izimvo ezingagqitywanga. Hlalutya izikweko, lungisa amagama angabhalwanga kakuhle, endaweni yamagama aphindaphindiweyo, kwaye uhlengahlengise izivakalisi kunye nemihlathi ukuze zingabi zide. Cela uncedo kubafundi abasondeleyo nabanyanisekileyo, banokuba lusapho okanye abahlobo. Ngamanye amaxesha kunzima ukubona ezethu iimpazamo kwaye sazi kuphela xa abanye bekuqaphela.
Hlela umsebenzi wakho kwinqanaba eliphezulu, ngokukhethekileyo ngoncedo lweengcali. Unokuqesha umhleli ozimeleyo okanye ungenise umbhalo wakho obhaliweyo kwinkampani yokupapasha. Ngokubanzi, ukuze uyilo lwamkelwe ngumshicileli, kufuneka luhlangane neeparameter ezithile. Oku kuhlala kuyinto ende kwaye ngamanye amaxesha kuyaphazamisa. Ukuba akukho mpendulo ifunyenweyo ngaphantsi kweenyanga ezi-6-ubuninzi- kuya kufuneka ucinge ukuba isicelo sakho saliwe.
Inkqubo yokwenza incwadi iphela xa ipapashiwe. Zininzi iindlela zokwenza eli nyathelo. Okwangoku zininzi ezinye iindlela zokupapasha isihloko. Akusekho mfuneko yokuba umpapashi amkele uyilo lokuba luziswe kwintengiso.
Ngoku, nawuphi na umbhali unakho ukuxhasa ngemali ukupapashwa kwakhe nenkampani ethile okanye awupapashe ngokwakhe umsebenzi wakhe. Izixhobo zedijithali zenza yonke inkqubo ibe lula kwaye inokwenzeka. Malunga nexesha, ukuba ungumbhali omtsha, kulungile ukuba uhambe kancinci. Kwelinye icala, ukuba sele unendawo yokufunda esidlangalaleni, akufuneki ulinde ixesha elide ukupapasha.
Ezinye iingcebiso ezingaphezulu
Kufuneka ibe yinyani kwaye ingafuneki kangako.
Yiza nesicwangciso esifanelana nendlela ophila ngayo kwaye unokulandela ileta ukufezekisa injongo yakho.
Ukuba ucinga ukuba awunazo izakhono, izixhobo, ixesha, okanye ukugxila, ungasoloko uqesha umntu osebenza ngokuzimela. Qinisekisa ukuba uyawuqonda umbono wakho. Qiniseka ukuba inalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuguqulela izimvo zakho.
Ukuba incwadi yakho ayiyonyani, ukuhamba, ukutya, okanye abantwana, faka ezinye izinto ukongeza kwisicatshulwa. Unokongeza: imizekeliso, iifoto, iitafile, phakathi kwabanye.
Umzekelo wencwadi yakho uyilo olwahlukileyo unika ingqalelo ekhethekileyo kwikhava.
Shicilela zombini kwifomathi yedijithali kunye neyomzimba. Ukuba kunokwenzeka, phrinta kwimfuno ukuthintela ilahleko.
Zama ukupapasha ngexesha lonyaka ngokwencwadi yakho. Umzekelo: ukuba isihloko sithi "IziGqibo zeminyaka emitsha", eyona nto isengqiqweni kukuba upapashe ngemihla yeKrisimesi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Uyibhala njani incwadi